Mourinho Waa Mid Kamid Ah Dadka Helaya Faa’ida Ugu Badan Koobka Aduunka 2018 [Sabab] %
Tababaraha kooxda kubada cagta Manchester United, ee Jose Mourinho ayaa wuxuu qaban doonaa koobka aduunka ee 2018, shaqo aysan cusbeen inuu qabto, taasoo ah inuu noqdo Noqdeeya cayaaraha ah ama Fallanqeeye.
Hogaamiyaha kooxda reer England, ayaa wuxuu heshiis uu la galay Muuq-baahiyaha reer Russia ee RT lagu magacaabo, isagoona ku qornaan doona shaqada Isbuucii Afar maalmood, wuxuuna cabiri doona Fikrikiisa.
Laakiin, sheekada xiisahalahi waxay tahay in ninkaan reer Portugal uu Afartaas maalmood ee uu Jadwalka leedahay uu qaadan doono aduun lacageed dhan Labo Milyan Yuuroo, taasoo ah qiimo lacageed badan.
Tani ayaa waxay ka dhigan tahay in Mourinho uu yahay mid kamid ah, dadka ugu badan ee koobka aduuka heli doono faa’idada ugu badan, iyadoona ay jiri doonto maalin uu si toos ah ula hadli doono tagaeerayaashiisa, taasoo final-ka ah.
“Waxaan hada usocdaa inaan xaadiro koobka aduunka ee Ruushka, inaan baahiyoo Fikradeyda,” ayuu Mourinho yiri
Sikastaba, Mourinho ayaa wuxuu iska diiday inuu heshiis la galo Shirkadaha BBC iyo ITV, kuwaasoo xiiseynayay adeeiisa, waxaana la rumeysan yahay inay sababtu tahay in saaxiibo badan badan uu Ruushka ku leeyahay
Koobkii aduunka ee 2014, ayay ahayd kadib markii Jose Mourinho uu shaqadaan oo kale uu qabto, markaasoo uu heshiis kula jiray Shirkadda Yahoo, waxaana xiligaas uu ku saxiixay Mashruucaas aduun dhan Hal Milyan oo Yuuroo.
Muxuu kusoo idladay kulankii adkaa ee Heegan Iyo Horseed